तपाईको निन्द्रामा बोल्ने बानी छ ? छ भने आजैबाट गर्नुस् यसरी परिवर्तन-Nepali online news portal
तपाईको निन्द्रामा बोल्ने बानी छ ? छ भने आजैबाट गर्नुस् यसरी परिवर्तन
कतिपय मानिसहरु निदाइरहेको बला बडबडाउने हुन्छन् । जसले गर्दा उनीहरु निकै चिन्तित पनि हुने गर्छन् । यो समस्या लिएर डाक्टरकहाँ पनि पुग्ने गर्छन् ।
निद्रामा कुरा गर्ने बानी छ ? कोही कोही मानिसको निद्रामा बोल्ने बानी हुन्छ । अंग्रेजीमा यसलाई सोम्नीलोकी भनिन्छ । यसरी निद्रामा बर्बराउने मान्छेका कुरा सुन्न मजा हुन्छ ।
मध्यरातमा हामीमध्येका केही के के बर्बराउँछौं । ती अरूलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ । जनसंख्याको लगभग एक प्रतिशत वयस्कलाई यस्तो बानी लाग्ने विज्ञान बताउँछ । यसरी बर्बराउने मानिसको अवचेतन मनका कुरा थाहा लाग्ने हुनाले बर्बराहट सुन्न मजा नै आउँछ भन्ने धारणा छ ।
तर निद्रा विशेषज्ञ माइकल ब्रेउस चाहिँ निद्रामा बोलेको कुराको कुनै अर्थ छैन र यसलाई ध्यान दिनु वा विश्लेषण गर्नु बेकार हो भन्छन् । ‘निद्रामा बोलेको कुराले केही चीजको संकेत गर्ने वा अवचेतन मनको रहस्य खोल्ने भन्ने विषयमा कुनै आँकडा भेटिन्न,’ उनले भने ।
निद्रामा बर्बराउने मान्छेले आफ्ना सबै रहस्य खोल्छन् भनी सोच्नु मूर्खता भएको उनको भनाइ छ । तर यसले पर्याप्त निद्रा नपुगेको संकेत चाहिँ दिन्छ ।
राष्ट्रिय निद्रा प्रतिष्ठानले तनाव, अवसाद, दिनको थकान, रक्सी सेवन र ज्वरोका कारण पनि निद्रामा बोल्ने बानी लाग्ने बताएको छ । त्यसैले तपाईं निद्रामा बर्बराउनुहुन्छ भने नआत्तिनुस्, तपाईंका रहस्य सुरक्षित नै छन् । बरू यसबाट छुटकारा चाहनुहुन्छ भने रिल्याक्स गर्नुस् र राम्रो निद्रा पार्नुस् ।
तर, यो समस्याबाट छुटकारा पाउनका लागि केही घरेलु उपाय अपनाउन सकिन्छ :
– मानिस थकानकै कारण रातिको समयमा बडबडाउने गर्छन् । यसबाट बच्नका लागि पर्याप्त आराम चाहिन्छ । यसका लागि निद्रा पुरा गर्नुपर्छ । सकिन्छ भने दिनमा पनि सुत्न सकिन्छ । तर दिनमा आधा घण्टा भन्दा बढी निदाउनु हुँदैन ।
– यदि मदिरा खाने बानी छ भने त्यसलाई त्याग्नुहोस् । केही मानिस रातिको समयमा मदिरा पिइरहेको शैलीमा बडबडाउने गर्छन् । त्यसैले विस्तारै छोड्ने बानी गर्नुपर्छ ।
– यो समस्याबाट छुटकारा पाउनका लागि सबैभन्दा पहिलो तनावमुक्त हुनुपर्छ । कार्यालयको तनाव त्यही ठाउँमा छोड्नुहोस् । संगीत सुन्न सक्नुहुन्छ । त्यस्तै, तपाईलाई मन पर्ने कुनै काम गर्नुहोस् ।
– यदि यस्ता थुप्रै उपाय अपनामउँदा पनि समस्या दुर गर्न सकिएन भने एक पटक स्वास्थ्य संस्थामा गएर डाक्टरसंग सल्लाह गर्नुहोस् ।
– निद्रामा बोल्ने समस्याबाट बच्नका लागि रातमा केफिन भएको चिज जस्तै चियाकफीबाट टाढा बस्नुहोस् । चियाकफीको प्रयोगले निन्द्रा प्रभावित हु्ने गर्छ भने थकान पनि महसुश हुन्छ ।
यो जानकारी पनि थाहापाईराख्नुहोस् :
निद्रा भनेको हाम्रो जीवनको आधारभुत आवश्यकता हो । आधारभुत आवश्यकतामा खाना, पानी, निद्रा, सेक्स आदि पर्छन् । २४ घण्टामा कमसेकम ७ देखि ९ घण्टासुत्न सक्यो भने शरीरलाई फाइदा हुन्छ । जसका कारण ब्रेनलगायत शरीरका महत्वपूर्ण अंगलाई आराम दिन्छ ।
निद्रामा ९० मिनेटको साइकल हुन्छ । पहिलो २० मिनेटलाई सुरूवाती निद्रा भनिन्छ । जुन निद्रामा हामीहरु तुरुन्तै उठ्न सक्छौं । यसलाई ‘स्टेप स्लिप’ भनिन्छ । त्यसपछि करिव ५० मिनेट गहिरो निद्रा हुन्छ ।
गहिरो निद्रामा पुगेपछि मानिसलाई उठाउन गाह्रो हुन्छ र साइकलको अन्तिम १०–१५ मिनेटमा सपनाहरु आउने हुन्छ । यसरी ढेड घण्टाको एउटा साइकल हुन्छ । निद्रामा करीब ५–६ वटा साइकल पुरा गर्नुपर्छ ।
यसरी निद्रा साइकल पुरा भयो भने हामी बिहान उठिसकेपछि फ्रेसको महसुस गर्दछौ । निद्रा नलाग्न कारणहरु के के हुन् ? निद्रा नलाग्ने कारणहरु धेरै छन् । शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आध्यात्मीक कारणले गर्दा मानिसमा निद्रा नलाग्ने हुन्छन् ।
शारीरिक कारणमा धेरै किसिमका शारीरिक रोग, टाउको दुख्ने, भोक नलाग्ने, बिभिन्न किसिमका शारीरिक पिडाहरु हुन्छन् । सामाजिक कारणमा तनावहरु जस्तै आर्थिक, पारिवारीक, व्यक्तिगत तनावले गर्दा पनि निद्रा लाग्दैन ।
त्यसैगरी आध्यात्मिक मानिसहरुमा योग, व्यायाम ग¥यो भने र इच्छा पूरा ग¥यो भने निद्रा लाग्ने हुन्छ । अर्को मनोवैज्ञानिक कारणहरुमा डिप्रेशन, एन्जाइटी लगाएतका रोगहरु पर्दछन् ।
अर्को निद्रा आफैमा पनि एउटा रोग हुन्छ । जसलाई इन्सेम्निया भनिन्छ । निद्रा बढी लाग्ने पनि समस्या हो ? कोही कोही मानिसमा दिउँसै निद्रा लाग्ने रोग हुन्छ । यस्ता मानिसहरु महत्वपूर्ण कार्यक्रममा पनि निदाउछन् । त्यसैले चाहिने भन्दा धेरै निद्रा लाग्नुलाई नार्कोलेप्सी भनिन्छ ।
हामीहरु दैनिक ८–९ घण्टा सुत्ने गर्छौं तर नार्कोलेप्सी भएकाहरु त्यो भन्दा धेरै बढी सुत्ने हुन्छन् । साथै कोहीकोहीलाई दिउँसो निद्रालाग्ने भनेको धेरै खाना खाएपछि हो । यसमा मानिसलाई एक्कैछिन मात्र निद्रा लाग्छ र फ्रेस हुन्छ । दिउँसो निद्रा लागेर दैनिक कार्यमा धेरै असर ग¥यो भने केही औषधिहरु खानुपर्ने हुन्छ तर नेपालमा यो औषधि हालसम्म उपलब्ध छैन ।
यदि दिउँसो निद्रा लाग्छ भने सकमेसम्म ननिदाउनु नै उचित हुन्छ । निद्रासँग सम्बन्धित कस्ता समस्याहरू देखिन्छन् ? धेरै रोगहरु निद्रासँग सम्बन्धित हुन्छ । डिप्रेशन, एन्जाइटी जस्ता बिभिन्न रोगहरुमा निद्रा नै पहिलो समस्या हो ।
डिप्रेशन, एन्जाइटी तथा अन्य मनोवैज्ञानिक रोगको पहिलो लक्षण नै निद्रा नलाग्नु हो । यसबाहेक रोगलाग्दा, चिन्ता, दुखाई, डर, मानसिक तनाव आदीका कारणले पनि निद्रा नलाग्ने हुनसक्छ ।
कुनै रोग नलागि विभिन्न कारणले मानसिक तनाव हुने र त्यसले निद्रा नलाग्ने हुनसक्छ । निद्रा नलाग्ने समस्याहरु पनि विभिन्न किसिमका हुन्छन् । कहिले काँही थकानले सुत्न लागेपछि १÷२ घण्टासम्म निद्रा नलाग्ने वा २ देखि ३ घण्टापछि निद्राखुल्ने र फेरी निद्रा नलाग्ने हुन्छ ।
राती निद्रा खुलेर पुनः सजिलै लाग्छ, भने यो रोग भने होइन । निद्रामा बरबराउने किन हुन्छ र बरबराउनु रोग हो ? निद्राको साइकल हुन्छ । त्यो साइकल पार गर्दै जाँदा सपनाहरु आउने हुन्छ । सबै मानिसलाई प्रत्येक दिन सपना आउँछ तर जसलाई निद्राको समस्या हुन्छ, त्यस्ता मानिसले धेरै सपना देख्ने हुन्छ । किन भने धेरै जसो सपनाहरु गहिरो निद्रामा देखिन्छ ।
गहिरो निद्रामा आएको सपना सम्झिन सकिदैन । तर कम गहिरो निद्रामा आउने सपना मात्र सम्झने हुन्छ । त्यसैले कहिलेकाँही सपनामा आउने कुराहरु बरबराउने हुन्छ । निद्राको कारणले नै बरबराउने हुन्छ ।
यो रोग होइन, यस्तो समयमा मानिसलाई पनि थाहा हुदैन । यो सपनासँग आउने मात्र हो । निद्रामा दाह्रा किट्ने कस्तो समस्या हो ? यो पनि निद्रामै हुने भएको हुँदा मानिसलाई थाहा हुदैन । यो पनि रोग होइन ।
यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुहुदैन । निद्राको समयमा ऐठन किन पर्छ ? सुतेको समयमा शरीरका अंगहरु चल्ने हुन्छ । तर कहिले काँही कुनै अंगमा प्रेसर प¥यो भने त्यस ठाँउमा राम्रोसँग रक्तसंचार हुन पाउदैन । त्यस समयमा श्वासप्रश्वास बन्द भएको जस्तो हुन्छ ।
व्यक्ति आफैलाई निद्रामा हिँडेको थाहा हुदैन । यो समस्या गहिरो निद्रामा नपुग्दै सपनाको कारणले हुन्छ । यस्तो समस्यामा व्यक्तिलाई गहिरो निद्राको लागि औषधि पनि दिन सकिन्छ । यस्तो समस्या भएकाहरुले झ्याल, ढोकाको चुक्कल राम्रोसँग लगाउने जस्ता सावधानी अपनाउनु पर्छ ।
यसले शारीरिक असर गदैन तर कहिले काँही दुर्घटना हुन जान्छ । निद्रा लगाउने उपाएहरु के के हुन् ? जसलाई राती निद्रा लाग्दैन त्यसले राती सुत्ने र बिहान उठ्ने समय एउटै बनाउनु पर्छ ।
राती निद्रा लागेन भनेर बिहान ९ बजेसम्म सुत्नु हुदैन । बिहान नियमित एउटै समयमा उठ्नु पर्छ । त्यसैगरी यस्ता समस्या भएकाले चिया, कफि, सुर्तिसेवन गर्नुहुदैन ।
निद्रा नलाग्ने समस्या भएकाले सुत्नुपूर्व हल्का व्यायाम गरी तातो पानीले नुहाउने गर्नुपर्छ । साथै सुत्ने कोठालाई अँध्यारो र शान्त राख्नुपर्छ । बेडमा गएर निद्रा नलागेमा पुस्तकहरु पढ्ने गर्नुपर्छ । राती सुत्दा हलुका खानाखाने गर्नुपर्छ । बुझ्नैपर्ने कुरा रक्सिले निद्रा लगाउँछ भन्ने भ्रममा पर्नु गलत हो । रक्सि सेवनले केही समय निद्रा लगाउने भएता पनि पछिगएर रक्सिले नै निद्रा नलाग्ने समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।
निद्रा नलागेमा के गर्ने, के नगर्ने ?
– छिटो सुत्ने
– एउटै समयमा सुत्ने र उठ्ने
– निदाउनको लागि मदिरा नपिउने
– चुरोट÷सुर्ती सेवन नगर्ने
– भोकै नसुत्ने तर हल्का मात्रै खाने
– नियमित शारीरिक गर्ने
– सुल्नु भन्दा पहिले करिव आधा घण्टा आराम गर्ने
– निद्राको लागि औषधी प्रयोग नगर्ने
– सुत्नु भन्दा पहिले मनतातो दुध वा पानि पिउने
– सुत्नु भन्दा पहिले मन तातो पानीले नुहाउने
– तनाव घटाउने
आफूले आफैलाई सधैँ बोलिरहने खराब झुटहरु :
संसारमा झुट नबोल्ने मान्छे होला ? हामी झुट बोल्छौ कहिले नियोजित रुपमा कहिले परिस्थितीवश। झुट बोलेकै कारण आउने नतिजा फरक पाटो हो।
परिस्थिती हेरेर झुट बोल्ने मानिसले आफुसँग पनि झुट बोलेको हुन्छ, तर ‘तिमी आफूले आफैलाई सधैँ बोल्ने झुट के हो?’ भनेर सोध्दा उसको जवाफ आउँछ, ‘म मसँग झुट बोल्दिन, म आफूसँग सार्‌है इमानदार छुँ।’
तर हामीलाई वास्तविकता थाहा हुन्छ, हामी आफैँलाई ढाँटिरहेका हुन्छौ। यहाँ केहि झुटहरु उल्लेख गरिएका छन्, जो हामी दिनहुँ बोलिरहेका हुन्छौँ।
१.म मेरो धेरै उद्देश्य पुरा गर्छु,
हामी आफ्नो क्षमता, उपलब्ध स्रोत र साधन अनुसार आफ्ना लक्ष्य राख्दैनौ। ‘म यो पनि गर्छु, म त्यो पनि गर्छु’ भन्‍ने हाम्रो बानी हुन्छ। हामीले राख्‍ने सामान्य लक्ष्यहरुमा ।
– म कुनै दिन किताब लेख्छु,
– कुनै दिन म ‘सर्ट फिल्म’ बनाउँछु,
– कुनै दिन म धेरै टाढाको यात्रा गर्छु,
– कुनै दिन म एकदमै पागलपन गर्छु,
– कुनै दिन म मेरा मानिसलाई भन्छु, मेरा लागि उनीहरु को हुन्।
२. जब कसैले सोध्छ, ‘तपाईलाई कस्तो छ ?’
हाम्रो शरीर धेरैओटा प्रणालीबाट सञ्चालन भएको हुन्छ। यो प्रणालीमा कहिले-काँही गडबडी हुन्छ। जसलाई अनुहारले पनि देखाउने गर्छ। तर हामीलाई कसैले सोध्यो भने हामी उत्तर दिन्छौ, ‘मलाई सञ्‍चै छ।’
३. धेरै महत्वपूर्ण मिटिङको समयमा
हामीसँग स्मरण शक्ति छ। हामी घटना, ठाउँ सम्झन सक्छौ। तर सबै चाँहि होइन। सम्झन सक्ने हाम्रो क्षमताको भरमा हामी आफैँलाई ढाँटिरहेका हुन्छौ। दैनिक जीवनमा हामी सहभागी हुने मिटिङमा केही कुरा बोल्नु पर्ने पनि हुन्छ।
हामीलाई लाग्छ हामी सम्झन्छौँ, तर सधैँ हाम्रो स्मरण शक्ति त्यति तिखो हुन्न। ‘मैले लेख्न जरुरी छैन, म सम्झन सक्छु’ भन्दाभन्दै सबै कुरा हामी सम्झन सक्दैनौ तर हामी बारम्बार झुट बोल्छौँ।
४. मध्यरातमा मोबाइल चलाउँदा
मोबाइल फोन मानिसको लागि अहिले सबैभन्दा नजिकको साथी भएको छ। बिहान आँखा खोल्ने बेलादेखि ननिदाउँदासम्म हामीसँग हुने भनेको मोबाइल मात्र हो। हामी मोबाइलसँग यति नजिक छौ की मोबाइल चलाउँदा चलाउँदा समय बितेको थाहा हुँदैन।
निन्द्रा भन्दा मोबाइल प्यारो हुन्छ। विशेषगरी राति सुत्ने बेलामा ‘अब १० मिनेट मात्र चलाउँछु र सुत्छु’ भन्दा भन्दै रात नै बित्ने गर्छौ। ‘अब १० मिनेट मात्र चलाउँछु’ भन्नु आफैँसँग बोल्ने झुट हो।
५. सधैँ कार्यालय र मिटिङमा
मानिसको सुन्ने कम र बोल्ने बानी हुन्छ। विशेषगरी कार्यलयको मिटिङमा हामीले आफूलाई प्रस्तुत गर्दा ‘म जतिको स्मार्ट मान्छे कोही छैन भन्ने हाम्रो बानी हुन्छ।
६. हरेक नयाँ वर्ष सुरु हुनु अघिल्लो दिन
नयाँ वर्षसँग नयाँ संकल्प गर्ने हाम्रो बानी हुन्छ। हरेक वर्ष नयाँ वर्ष सुरु हुँनै लाग्दा हामी भन्‍ने गर्छौ, ‘यो नयाँ वर्ष म साच्चै कम्तिमा एउटा नयाँ वर्षको संकल्प गर्छु र कडाइका साथ लागू गर्छु। यो मेरो बाचा हो।’ तर हरेक वर्ष यस्ता धेरै संकल्प गरिन्छन् र पूरा गरिदैनन्, हामी नयाँ वर्षमा संकल्प गर्न पनि छोड्दैनौँ।
७. हरेक ब्रेकअप पछि
प्रेम बिछोड जीवनका पाटा हुन्। जीवनको एक मोडमा भेटिने साथीसँग अर्को मोडमा पुगेर छुट्टिनु पर्ने पनि हुन्छ। हरेक प्रेम सफल हुँदैनन्। हामीले आफैलाई बोल्ने झुटमा प्रेम सम्बध पछिको बाचा पनि हो। प्रेम सम्बन्धको अन्त्यपछि ‘म उसलाई बिर्सन्छु र अब उसलाई कहिले पनि सम्झन्न।’ भन्छौ। तर हामी भुल्न र नसम्झन सक्दैनौँ।
८. भोलि बिहान चाँडै उठ्छु।
हामीले आफैसँग बोल्ने धेरै झुट मध्ये एउटा झुट हो, ‘म भोलि बिहान चाँडै उठ्छु र पढ्छु, कसम हो।’ बिहानीको निन्द्रा सार्‌है मिठो हुन्छ। ओछ्यानमा लुपुक्क परेर निदाइरहेको बेलामा बेलुका सुत्ने बेलामा गरेका बाँचालाई वेवास्ता गर्ने गरिन्छ।
९. म आफूसँग झुट बोल्दिन्
मानिसले परिस्थितीले कहिलेकाँहि झुट बोल्ने गर्छौ। तर झुट दोस्रो व्यक्तिसँग मात्र होइन आफैँसँग पनि बोल्ने गरिन्छ। त हामी तिमी आफूलाई कत्तिको ढाट्छौँ भन्ने प्रश्नमा जहिले पनि हामी भन्छौँ, ‘होइन, म आफूसँग सार्‌है इमानदार छुँ।’